Apple inopindura Bloomberg: inhema kuti kuvimbika kweFace ID kwaderera | IPhone nhau
Apple inopindura Bloomberg: inhema kuti kuvimbika kweFace ID kwaderera
Masikati ano isu takakuudza iwe kuti Blomber yakaburitsa sei chinyorwa mairi yaakataura izvozvo Apple yakanga yadzora pachena kuvimbika kweFace ID nechinangwa chega chekuwedzera mwero wekugadzira. Nekuda kweyakaomarara nzira yekugadzira yezvinhu zveiyo iPhone X iyo inotora chikamu mune ino chengetedzo sisitimu, mwero wekugadzirwa kweiyo iPhone wanga usingafadzi, uye nekudaro sarudzo iyi.
Iyi yakakosha nhau uye iyo yakanangana yakanangana nechengetedzo sisitimu yeiyo nyowani iPhone X, yakagadzirirwa kuve yemusika mareferensi emakore anouya uye inokoshesa mabasa akakosha sekubhadharisa nharembozha, haigone kutadza kujekeswa neApple, uye yakazviita nenzira yakanakisa: inoramba kwazvo.
Mhinduro yakaburitswa muBusiness Insider uye iri, rakashandurwa muchiSpanish, seinotevera
Kushingairira kwedu kwevatengi kwe iPhone X uye Face ID kwave kushamisa, uye hatigone kumirira vatengi kuti vaise maoko avo pazviri kubva Chishanu, Mbudzi 3. Face Id ndeye yakachengeteka uye ine simba kwazvo, yakapusa uye inonzwisisika kwazvo chengetedzo sisitimu. Hunhu uye kurongeka kweFace ID hazvina kuchinja, pamwe nekugona kuti munhu akasarudzika anogona kuvhura yako iPhone ingori 1 mumiriyoni.
Kutaura kwaBloomberg kwekuti Apple yakadzora kuvimbika kweFace ID kuitira kuti kuwedzere kugadzirwa kwekufamba inhema zvachose, uye isu tinotarisira kuti Face ID ive chiratidzo chekuzivikanwa kwechiso.
Mhinduro yaApple haigone kuve nesimba uye haina kumbotora nguva kuuya. Apple haiwanzo kuratidza pamberi peaya makuhwa-based nhau, asi kukosha kweiyo svikiro kwavakaitika uye kukomba kwenhau dzinofungidzirwa kwakatungamira kumhinduro iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Apple inopindura Bloomberg: inhema kuti kuvimbika kweFace ID kwaderera
Chirevo cheBloomberg chinoti Apple iri kudzikamisa iko kurongeka kweFace ID